Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Laos » Laos waxay kordhineysaa xiritaanka dalka oo dhan ilaa 18ka Ogosto
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • Warshadaha Warshadaha • Wararka Laos • News • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Ammaanka • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka kala duwan
Qufulka ayaa la kordhin doonaa maadaama xaaladda COVID-19 ee Laos aan weli si buuxda gacanta loogu haynin xaaladda waddamada deriskana ay weli halis tahay.
Xiritaanka hadda dalka oo dhan, oo la soo rogay 19 -kii Luulyo, ayaa lagu wadaa inuu dhaco Talaadada.
Laga soo bilaabo Talaadadii, tirada guud ee la xaqiijiyey COVID-19 ee Laos ayaa gaartay 7,015 iyadoo toddobo ay dhinteen.
Wadarta 3,616 bukaan COVID-19 ayaa soo kabsaday oo laga saaray isbitaallada.
Dowladda Laos ayaa ku dhawaaqday inay go’aamisay in la kordhiyo xannibaadda COVID-19 ee hadda waddanka oo dhan ilaa 18ka Ogosto iyadoo tirada cudurrada cusub ee coronavirus ay sii kordhayaan.
Ku-xigeenka Madaxa Xafiiska Ra'iisul Wasaaraha, Thipphakone Chanthavongsa, ayaa shir jaraa'id ku sheegay caasimadda Lao Vientiane Talaadadii in xannibaadda la kordhin doono maaddaama xaaladda COVID-19 ee Laos aan weli si buuxda gacanta loogu haynin xaaladda waddamada jaarkana ay weli halis tahay.
Hadda Laos Xiritaanka dalka oo dhan, oo la soo rogay 19 -kii Luulyo, ayaa lagu wadaa inuu dhaco Talaadada.
Guddiga Qaran ee Ka-hortagga iyo Xakameynta COVID-19 ayaa Talaadadii soo sheegay 237 xaaladood oo cusub oo la soo waariday iyo 13 xaaladood oo gudaha lagu kala qaado.
Kiisaska la soo dejiyay, 78 ayaa laga soo sheegay caasimadda Lao Vientiane, 63 Savannakhet, 48 Champasak, 30 Khammuan, 16 Saravan, iyo laba gobolka Vientiane.